Dr. Buurane oo saakay lagu dilay degmada Hodon - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Dr. Buurane oo saakay lagu dilay degmada Hodon
Dr. Buurane oo saakay lagu dilay degmada Hodon
Waxaa saakay si naxariist daro loo dilay Allaha u naxariistee dhakhtar Buurane oo ka mid ahaa Dhaqaatiirta sida weyn looga yaqaanno Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya, waxaana la helayaa faah faahinno dheeraad ah oo ku aaddan dilka Marxuumka.
Warar hordhac ah ayaa sheegaya in Marxuumka lagu dilay xaafadda Al-baraka ee degmada Hodan, gaar ahaan agagaarka Ceynu Shamsi, waxaana dad goobjoogayaal ah ay sheegeen in dilka ay fuliyeen dabley hubeysan. Dr Buurane ayaa ka mid ahaa dhaqaatiirka ka howlgala Muqdisho kuwaada ugu caansan, waxaana lasoo sheegayaa in goobta uu dilku ka dhacay ay gaareen Ciidanka ammaanka Dowladda kuwaasi oo wada howlgal ay ku baadi goobayaan dableydii falka gaysatay, inkastoo ilaa iyo hadda aan la shaacin cid loo soo qabtay dilka dhaqtarka.
Dhaqtarkaan ayaa ku taqasusay Cudurada ku dhaca Maqaarka, isagoo in muddo ah kasoo shaqaynayay, waxaana sidoo kale uu ahaa dhaqtar ay bulshada Muqdisho si weyn u garanayaan. Dhaqaatir kooban ayaa taqaan daaweeynta cudurada ku dhatxa maqaarka.